I-45 YEENDAWO ZENWELE EZIBALASELEYO ZAMADODA (2021 STYLES BRAID) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-45 yeeNwele zeKhonkco eziBalaseleyo zaMadoda
Iikona yenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngabantu abamnyama. Ukusuka kufutshane ukuya kukude kwaye kuncinci ukuya kukhulu, ii-cornrow braids ziza kwiindlela ezininzi, uyilo kunye nokusika ukunika ...
Iikona yenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngabantu abamnyama. Ukusuka kufutshane ukuya kubude kwaye kuncinci ukuya kukhulu, ii-cornrow braids ziza kwiindlela ezininzi, uyilo kunye nokusika ukunika amadoda inkangeleko efanelekileyo. Ngelixa uninzi lweenwele ze-cornrow ziqala ngefade, i-taper, i-undercut okanye amacala achetyiweyo ukuqaqambisa iinwele eziphothiweyo ngaphezulu, abanye abantu bakhetha ukuluka zonke iinwele zabo ngqo ngasemva okanye ezantsi ecaleni. Ukuba ufuna izimvo malunga nendlela yokuluka iinwele zamadoda, jonga ezona ndlela zilungileyo zokuloba i-cornrow yamadoda ukuze ufumane ukukhuthazeka. Ngeendlela ezininzi zekona ezinesitayile sokuphonononga, nazi ezinye zezona braids zipholileyo ukuzama kulo nyaka!
1ICornrow Braids yaMadoda
2.3Amacangci anamacala achetyiweyo
2.12Amakhonkco kunye neTaper
2.13IBig Cornrow Braids
2.18Iikona ezinkulu nezincinci
2.20Ukuhamba ngqo kwiikona
2.21I-Zig-Zag Cornrow Braids
2.23Phezulu kweKona ePhakamileyo
ICornrow Braids yaMadoda
Uhlobo lwe-cornrows luhlobo lokuluka, njengebhokisi yeebhondi okanye ii-dreadlocks. Nangona kunjalo, obu buchule busebenzayo obufana nqwa nabantu abamnyama kodwa bufikeleleke kubo bonke buhlala bufutshane kakhulu kwaye buthambile, busenza ukuba kube lula emehlweni. Isitayile sokuqala sokwaluka sinokuba lula kwaye sicoceke okanye sintsonkothe ​​ngakumbi kwaye sipholile.
Iibhontshisi zeCornrow ngokubanzi zisebenzisa iiplits ezinkulu kunye ezincinci ukwenza ukujonga okugudileyo kugcwele ubume. Bakwangombulelo omangalisayo wangoku kuyilo loyilo, olunamagqabi aqengqelekayo kuwo onke amacala kunye nemigca. Abafana bayazithanda ezi ntlobo zombona ngenxa yokuba kulula ukuzidibanisa kunye nezitayile kunye neendlela ezikhoyo kwinqanaba ngelo xesha. Umzekelo ogqibeleleyo ngumgca wokudibanisa owongeza kuphela kulwazelelo kunye nokuma kwendalo yobuhle.
Ukuba ujonge ivolumu eyongezelelweyo ngaphezulu, ungayifumana nge-cornrow fade. Into emnandi ngokudibanisa iicornrows kukungabi bhetyebhetye. Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zetaper fade haircuts ukuzama, kunye nolusu oluphakathi kunye ne-bald fade ephezulu yokusika okuthandwa kakhulu ukuzama ngamakhonkco.
Ngokwendalo, ungabandakanya ubungakanani obahlukileyo ngokudakumba okuphela okwehla kunye nee-arcs ngaphezulu kweendlebe okanye ukuhla kwethontsi okujika kuye entanyeni. Isitshixo kukudibanisa ii-braids zakho kunye nokuphela kokuqinisekisa ukuba isitayile asiguquki kwaye sidlalwe.
Amacangci anamacala achetyiweyo
Iikona ezinamacala achetyiweyo mazikugxininise kwindawo ekujongwa kuyo-i-cornrow braids yakho. Kuba akukho zinwele ngasemva nasemacaleni, iliso litsalwa kwangoko kwizinwele ezingaphezulu. Ungathatha ithuba lokucheba amacala ngokusebenzisa uyilo oluntsonkothileyo, njenge-zig zag, ezinkulu nezincinci, okanye ikona yesigcawu. Nge-cut-cut ecocekileyo, ubuhle obutsha, ungasusa isitayile sokubhabha kwabasetyhini baya kufumana eshushu kunye nesini.
Ukuba ufuna ukugcina isixa esincinci seenwele, kuya kufuneka uzame i-razor fade okanye i-bald fade esezantsi njengoko ishiya iindiza zokuthambisa ngakumbi. Thetha kumchebi wakho kunye no-stylist malunga nokuphelisa amacala ukuya eluswini ukuqaqambisa i-cornrows zakho ngaphezulu.
Uninzi lwee-cornrows luphezulu kwaye luqinile, ukujija ngasemva, ngelixa iicornrows ezisecaleni ziyehla ziye ezindlebeni nasentanyeni. Ezi braids ziyimfashini ngenxa yokuba ziyimvelaphi kunye nokwahluka okupholileyo kwiklasi. Icebo kukugcina iindawo ezilula kunye nobude obuphakathi.
Ngale ndlela, amacangci emacaleni ayabonakala ngaphandle kokuphulukana nesimo sabo sokukhululeka. Ezi ziyinto entle kumadoda aneenwele ezinde njengoko ephelisa ulondolozo oluza neeltshi ezimnandi.
Iikona ezilula ziyisiseko kuyilo, kodwa zinamandla kakhulu. Kungenxa yokuba uyilo olungqalileyo luqinisekisa ukuba i-aesthetic ayilahleki, enokuthi yenzeke ngokuntsokotha okuntsonkothileyo. Ngenxa yoko, ii-cornrows ezilula zodidi kwaye zintle, ngakumbi xa uziwele ngamawele.
yintoni uphawu lwam lokuphuma kunye nenyanga
Nangona omabini la manqaku mancinci, ayasebenzisana ukwenza ukubukeka okubukhali njengasekhaya eofisini njengokuba kusekhaya okanye ibhar. Abafana abaneenwele ezimfutshane banokuzisika ngasemva, ngelixa amadoda aneenwele ezinde angazibopha kwibhokisi yendoda ukongeza enye into.
Iindlela ezimbini zekona zikwinqanaba kuba ii-braids zisebenza njengendawo ekugxilwe kuyo. Ngokwesiqhelo inkulu kwaye iyatyeba, la mabala mabini alawula intloko yakho, ebaleka yonke indlela eya ngasemva.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba olu hlobo luswele ubukhali okanye i-finesse. Ngokuphakama ukuya kuthi ga esiphelweni esiphakathi, uya kubetha ibhalansi emnandi phakathi kwesitayile esinesibindi kunye nokusebenza ngokugudileyo nokuthe tye.
Ukufumana i-cornrows ezintathu kudala isitayile esolukiweyo seenwele kubafana abafuna ukubukeka okupholileyo kunye nokungaqhelekanga. Ukufezekisa olu hlobo lwee-cornrow braids, isitayile sakho sokudibanisa sinokuxuba kunye nokutshatisa ezinkulu nezincinci okanye ezinobungqingqwa kunye nemigca ecekeceke yeenwele kuyo yonke indawo okanye ephele macala.
Nokuba ufuna ukubuyela emva ngokuthe ngqo kunye neklasikhi okanye i-zig zag kunye nokuyila, ii-cornrows ezintathu zihamba kakuhle. Khulisa kwaye ubumbe iindevu zakho ukongeza ukubamba kwendoda kolu jongo.
Uya kufumanisa ukuba ii-cornrows ezine zikuvumela ukuba ubeke ii-braids zakho ngokukuko njengoko ungakhathazeki ngokwenza ingxelo ngemigca emi-2 okanye emi-3 kuphela yamaqhosha. Ngelixa unokufumana ukuphela okanye ukusika ngaphantsi emacaleni nasemva, uninzi lwabafana lukhetha ukuyigubungela yonke intloko ngeebraids ukwandisa isithuba kunye nokugubungela.
Eyona ndlela ilungileyo yokwenza isitayile se-cornrows sesibini kukuba neziko embini kunye namacala amabini entloko, onke ajikeleziswe kwisithsaba sakho nakwintlanganiso emva. Khumbula ukuba unokukhetha ukuba mingaphi imiqolo oza kuba nayo, ke ngoko zama iindlela ezimbini, ezintathu okanye ezine zokuluka.
Kukho iitoni zoyilo lombona phaya. Awudingi ukunamathela kwizilingo ezivavanyiweyo kwaye uvavanye ngasemva ukuba ukufumanisa kunzima. Endaweni yoko, ungadlala ujikeleze ngee-braids zakho nangona ubona kufanelekile, nokuba oko kuthetha ukuwela okanye ukuwafaka kwi-mohawk.
Musa ukoyika ukudibanisa ubunzima kunye nokulula, nokuba. Umkhwa owaziwayo kunye nowangoku usebenzisa i-helix ephindwe kabini ngaphezulu kunye nokubekwa okuqhelekileyo kwicala loyilo lokugqibela.
I-cornrows emfutshane ibhuqa intsomi yokuba ngamadoda kuphela aneenwele ezinde anokufumana ii-braids kunye ne-plaits. Ezinye izitayile zingcono xa iinwele zakho zikhulile, kodwa ii-cornrows ziyafikeleleka okoko ukhetha ngobulumko.
Eyona ndlela ilungileyo kukudibanisa iinwele zakho zibe yimigca emifutshane egqibezela kwisithsaba kwaye uzidibanise kunye nesifutshane. Amacala amafutshane agxininisa ii-braids, ngakumbi ukuba ufaka ii-micro plaits nge-thicker, braids ezinde.
Iimbombo ezinde azimisi kwisithsaba - ziyaqhubeka zide zibethe amagxa akho okanye umphezulu womqolo wakho. Uhlobo lwe-iconic yimigca eboshiweyo entloko exhonywe simahla kwaye ikhululekile. Cinga ngePost Malone kwisizukulwana sangoku.
Nangona kunjalo, ii-cornrows ezinde azilingani konke konke. Ukuba ufuna ukutshintsha izinto phezulu, unokuwabeka amacala kwaye uvumele ii-braids ezimbini ezandisiweyo zisebenze ngendlela yazo ukusuka ngaphambili kwentloko yakho ukuya ngasemva.
Amakhonkco kunye neTaper
Amakhonkco ane-taper yeyamadoda angafuni ukubuna kwesikhumba okuveziweyo njengoko kufuneka ukuba ahlale enesitayile kunye nobungcali ngokulinganayo. Icebo lokufumana itaper enamandla ngee-cornrows kukudibanisa iinwele ezimfutshane nakwinwele ezimfutshane zohlengahlengiso olungenamthungo olufihlakeleyo nolugudileyo.
I-line-up yongezwa ngokugqibeleleyo ukuba i-taper yakho ayinasibindi ngokwaneleyo, ngakumbi ukuba usebenzisa i-arc ukuyidibanisa kwi-sideburns yakho.
IBig Cornrow Braids
Ii-cornrows ezinkulu ze-braids zenzelwe amadoda aneenwele ezishinyeneyo ezifuna indlela engenangxaki yokuluka iinwele zazo ngaphandle kokulahla nasiphi na isitayile. Ziyaziwa kakhulu phakathi kwabafana njengoko ii-cornrows ezinkulu zivelile, zibenza babe yindoda kakhulu.
Ingcebiso enkulu kukuba uqale ngeeplati ezincinci ngaphambili kwentloko yakho kwaye uzenze kancinci kancinci njengoko zifikelela kwisithsaba sakho. Emva koko, ubungakanani obahlukeneyo buya kuncedisana ngeaplomb.
Iikona ezincinci zilungile kumadoda aneenwele ezincinci njengoko zandisa ubude kunye nobukhulu, ezenza ukuba zibonakale zinde kwaye zigcwele. Ii-braids ezincinci ze-cornrow ziboleka kuyilo olunzima ngakumbi kuba kukho indawo eninzi yeendawo ezintsonkothileyo zeemilo kunye nobukhulu obahlukeneyo.
Izitayile zekona encinci ziya kunika iinwele zakho ukujongeka okulinganayo, ke akukho sizathu sokwenza izinto nzima ngakumbi.
abantwana abamnyama iinwele zichetywe
I-cornrows ezilula zikuvumela ukuba unakekele iinwele zakho kusasa kwaye ungakhathazeki ngazo kwakhona. Ulondolozo luphantse lube zero njengoko kuthatha kuphela indawo ethe ngqo yokuyibeka endaweni.
Amanye amadoda anokufumanisa ukuba ayadika emva kwethutyana, kodwa ungayikhathalela le nto ngokutshintsha ubungakanani beebraids. Umzekelo, khetha imiqolo emide, egcweleyo ngaphezulu kunye nokuncinci, imigca ethe rhoqo kumacala esitayile esiqhelekileyo nesisebenzayo.
Ngeenwele ezilula, abafana banokufumana isithsaba sesithsaba ngasemva kwentloko. Iikona ezijikeleze ukutya kwesithsaba ngasemva kwaye uqhagamshele kuyilo setyhula ukwenza uzive ungukumkani. I-Crown cornrows yamadoda inokuba yinto elula kwaye intle, kodwa isitayile sitsha, sigqibelele kwaye sinomtsalane.
Njengazo zonke izimbo ze-mohawk, i-cornrows kunye ne-mohawk yenza ingxelo yokuba awukho apha ukuzokujikeleza. Ke ngoko, ayenzeli ukuphelelwa ngamandla kwentliziyo. Ukuba uluhlobo lomntu othanda ukwenza umboniso, kuya kufuneka ushiye isityalo seenwele ngaphezulu esibanzi ngokwaneleyo ukuba usike kwi-mohawk. Iisentimitha ezimbini kufuneka zibe ninzi. Ngazo zonke iinwele zakho, kuya kufuneka uzicuthe kubungakanani ukuze icandelo eliphakathi libe yinto yokuqala abantu abayiqaphelayo xa bejonga kwizitshixo zakho. Vumela umva we-mohawk ukhule kwaye uyiqhawule entanyeni yakho ukuze ubhenele.
Iikona ezinkulu nezincinci
Iikona ezinkulu nezincinci zandisa umahluko ekwenzeni isiphumo esingenamthungo esikhupha into nganye yeebhondi zakho. Zininzi izinto ezikhethiweyo onokukhetha kuzo, ke isigqibo sesakho. Ukuba ukhangela inkuthazo, uninzi lweenwele ezifana nokudibanisa umxube wee-micro, ezincinci, kunye nejumbo braids yendlela eyahlukileyo. I-undercut kumacala iya kuthatha oku kusikwa kwelinye inqanaba.
Amakhonkco e-Blonde enzelwe xa ii-plaits kunye ne-braid ke kumda wawo. Ngamanye amaxesha, nditsho nokutshintsha ubude, ivolumu, kunye nepateni akwanele ukukunika into wow oyilandeleyo. Ngakolunye uhlangothi, i-Bleach iphakamisa ngokukhawuleza i-cornrows yakho kwaye iyenze ibe nesibindi esihle. Amadoda angafuni ukuya kwi-blonde ngokupheleleyo kufuneka agqibe kwimiqolo nganye endaweni yokuba ithambile kwaye ingabi njengasebusweni bakho, kodwa isacenga.
Ukuhamba ngqo kwiikona
Amakhonco angasemva athe ngco ajikeleze amashumi eminyaka, kodwa aqhubeka nokugcina imeko yanamhlanje. Ngokwesiqhelo, oku kungenxa yokuba ii-braids zangasemva ezichanekileyo ziyahluka. Inketho ebalaseleyo kukutshintsha ubungakanani kunye nenani lemiqolo ukuze ubandakanye izinto ezintsha.
Umzekelo, ukuba utshintsha ushiye imiqolo esibhozo uye kwisine, ungasebenzisa ukuphela okanye ukuwela ngendlela eyahlukileyo yanamhlanje.
I-Zig-Zag Cornrow Braids
Iibhanti ze-Zig-zag zibonisa ukungafani kwemibhobho njengoko kukuvumela ukuba uzame ngeendlela ezahlukeneyo ze-zig-zag de ufumane uyilo olufanelekileyo. Nokuba yeyiphi oyikhethayo, oku kukucheba iinwele okufana neenkwenkwezi okubamba ingqalelo eqhele ukufunyanwa ngokuthandwa ziimvumi kunye nabadlali. Indlela elungileyo yokugcwalisa ii-zig zags kukuzibhala ngeplit ende ende ejikelezileyo kwicala ngalinye kunye nokongeza i-undercut.
I-Snoop Dogg kunye nabanye abavakalisi abadumileyo benza i-spider braids eyaziwayo kwiminyaka ye-1990. Igama libhekisa kwisakhelo sewebhu yesigcawu abamele njengoko iiplagi ziqala embindini kwaye zifikelela kwikona nganye yentloko yakho. Zinesibindi nesibindi, izigcawu zizodwa kwaye ziyahambelana nokufiphala okuninzi kunye nolungelelwaniso ecaleni konwele.
Phezulu kweKona ePhakamileyo
Iimbombo eziphezulu eziphezulu zezinwele zamadoda eziqala ngeenwele eziphezulu kwaye zifakwe kumngxunya wombona. Izinto eziguqukayo kunye nezithandwayo, abafana banokuzama iindlela ezininzi zokulungisa iinwele eziphezulu kunye noyilo lokwenza inkangeleko abayifunayo.
NjengoSnoop, ii-Xzibit braids zenziwa zaduma kwii-90s ngexesha le-Gangsta rap. Ukwalatha isitayile esithile kunzima kuba umrepha kunye nomdlali wasitshintsha isitayile sakhe rhoqo. Ke, ukuba ufuna ukulingisa inkwenkwezi ye-Pimp My Ride, kuya kufuneka wenze njalo. Zama ukwenza isitayile uyilo olulula kunye neepateni ezinzima njengoko iXzibit yayisaziwa ngale ndlela.
Iikona zilungele iinwele zaseAsia kuba zihlala zithambile kwaye zinde, kwaye ilizwe laseAsia lisebenzise ithuba. Ukuba ufuna iicornrows zaseAsia, kuya kufuneka ugcine izinto zibekwe umva kwaye zikhululeke ngeebhsidi ezisisiseko ezingasemva ezijingayo ngasemva kwentloko. Buza i-barber yakho ye-undercut okanye i-taper fade haircut emacaleni nasemva ukufezekisa iindlela ezahlukeneyo.
Amakhwenkwe anokubonakala emhle ngeekona, nawo. Ewe kunjalo, abantwana babangcono ngokusikwa okuncinci njengoko bengenayo inkuthazo yokubambelela kwisiqhelo. Ke ngoko, imiqolo emincinci ephezulu enolungelelwaniso kunye nefade iya kujonga kwinqanaba nokuba kunganjani na. Ungayitshintsha ipateni ye plaits ukuba bafuna ukuzama into eyahlukileyo.
#3 Clipper ubude
icala inxalenye yokucheba amadoda
tapered ivy league ukuchetywa kweenwele